Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Zvita, 11, 2020
Zvita 11, 2020
Huwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCovid 19 munyika huri kuramba huchikwira zvichitevera kufa kwemunhu mumwechete nezuro kuManicaland, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nyika yose pamazana matatu nevashanu, kana kuti 305.
Mhuri dzinokwana zana nemakumi matatu nena dziri kupurwa nemvura dziri panze mushure mekunge kanzuru yeHarare yaputsa dzimba dzavo kuBudiriro 5 nemusi weChipiri dzichinzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo.
Rimwe sangano revarairidzi, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, rinoti nhengo dzaro dzakabatana nevabereki vanyorera mutungamiri wenyika gwaro renyunyuto vachinyunyuta nemabatirwo avanoti ari kuitwa bvunzo dziri kunyorwa nevana munguva ino yeCovid-19.
Mutungamiri webato rinopikisa VaNelson Chamisa, nhasi vadyara miti kuGoromonzi South senzira yekucherechedza zuva rekudyarwa kwemiti munyika, reNational Tree Day, iro rinocherechedzwa Mugovera wekutanga mumwedzi waZvita gore roga roga.
Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica, VaJoe Biden nezuro vakazivisa nezvekudoma kwavo vamwe vanhu vane chitsama vachatora zvigaro zvepamusoro muhurumende yavo, kusanganisira madzimai matatu asiri echichena.
Munhau dzemitambo, Mutambi wenhabvu wemuZimbabwe Tino Kadewere atambidzwa mukana wekuratidza zvaakapakata chaizvo apo ari kusangana nevamwe vevakomana vakuru munhabvu pasi rese Neymar, na Killian Mbape.
Muchirongwa chedu cheLiveTalk na 8:00pm, nhasi tiri kutarisa nezveCovid-19 pamwe nezviri kuitika muAmerica zvichitevera sarudzo dzakaitwa musi wa 03 Mbudzi gore rino.